Holm किन्नुहोस पुस्तक | Holmbygden.se
नयाँ: Läs recension i Sundsvalls Tidning.
गिरावट देखि 2012 Holm मा Holm गरेको स्थानीय इतिहास समाज कागज बिक्री. पुस्तक पढ्न र कसरी अनलाइन मार्फत सिधा Holm मा खरिद गर्न वा – स्वीडेन वा अन्यत्र संसारमा तपाईं बस्नुहुन्छ भने उपयुक्त विदेशियहरुको.
“Holm – वन र पानी भूमि”
वर्तमान दिन तस्विरहरु र कथाहरू जीवन र देहात प्रागैतिहासिक पटक बाट चित्रण. यस वन, पोखरी र नदी प्ले मानिसहरूको जीवनमा ठूलो भूमिका यस पुस्तकमा पुस्तकहरू धेरै देखाउँछ. पुस्तक पुरातात्त्विक रहलपहल देखि लिन्छ, को गाउँमा गर्न अध्यागमन 1300- र 1400s, यस डेमोग्राफिक heyday 1800 को आखिर मा अस्थायी युग र धेरै धेरै मा. पछाडि आवरण पढ्नुहोस्.
पुस्तक सीमित संस्करण मा उपलब्ध छ र पहिले नै लगभग बेचिएको थियो 400 नमुनाको (!) म नोभेम्बर. तपाईं संग पुस्तक आदेश मौका लिन. फोन आदेश, वा बाहिर कसैले को Holm मा डाउनलोड निर्देशक बोर्ड. तपाईं पनि मेल तल गरेर पुस्तक घर आदेश गर्न सक्छ.
वास्तवमा: 250 र पक्ष 1.2 किलो चित्रहरु र पाठ Holms इतिहास बारे.
मूल्य: 250 kr.
फोन पुस्तक किन्न / व्यक्तिगत सम्पर्क:
ड्राइभ Berget: लार्स-एरिक Wikholm 0692-500 26
Sundsvall: पुस्तक सीधा दायाँ र Vängåvans किताबहरु को दोकान गर्न Kulturmagasinet पसलमा खरिद गर्न सकिन्छ (लागि 299 kr).
postlevereans संग पुस्तक अनलाइन आदेश:
यहाँ क्लिक गर्नुहोस पुस्तक अर्डर.फारम बन्द.
Posten संग ढुवानीको (पुस्तक):
स्वीडेन मा: 66 kr
युरोप: 225 kr
युरोप बाहिर: 270 kr
भुक्तानी साधारण तरिकामा गरिनेछ
सबै भन्दा राम्रो फिट.
प्रश्नहरूको लागि सम्पर्क:
लार्स-एरिक Wikholm 0692-500 26
तपाईं पनि एक पठाउन सही र सन्देश क्षेत्रमा फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
लार्स-एरिक गर्न प्रश्न वा सरोकार संग ई-मेल. तलका मेल द्वारा पुस्तक अर्डर पठाउन. सन्देश Hembygdsföreningen जान्छ.
जिप कोड र शहर:
भूमि (खाली क्षेत्र = स्वीडेन):
पुष्टि गर्न तस्वीर संकेत को मुद्रण:*
Holm गरेको स्थानीय इतिहास समाज थप पढ्नुहोस्.
I hö... थप पढ्नुहोस्